Gnome 3.2 dị | Site na Linux
Naanị ka a mara ọkwa dị ka onye na-ekwu, na mmepụta nke na-atụ anya version 3.2 de Gnome na mgbanwe ndị ọ gụnyere na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Site na ntọhapụ ndetu nke Gnome nke 3.2 anyị nwere ike igosipụta akụkọ ndị a:
Ugbu a ọ dị mfe ịmegharị windo ebe ọ bụ na ebe a abawanyela.
Ogwe aha, bọtịnụ, na njikwa ndị ọzọ dị ala, iji nwekwuo ike iji ya. GNOME na obere enyo.
Ma ọkwa na akuku aka nri dị ugbu a gụnyere tebulu. Nke a na-eme ka ọ dị mfe ịhụ ọtụtụ ozi ịntanetị a na-agụghị na mmemme email gị ma ọ bụ iji chọpụta ọnụọgụ ole ị na-agụbeghị na nkata.
Mmetụta pụta ìhè na-egosi na ngwa adịlarị na-agba ọsọ adịlarị ugbu a.
Enwere ike ịhazi ọkwa ọ bụla n'agbanyeghị ọnọdụ nkata na menu ndị ọrụ.
Oghere nhọrọ ọrụ na nyocha ahụ gbasaa na-egosi obosara ya mgbe ị na-eji ihe karịrị otu ebe ọrụ.
Nwere ike ịhazi ngwa maka kalịnda kalenda kama iche na Evolution bụ ngwaọrụ ndabara.
Ugbu a batrị fọdụrụ na-egosipụta site na iji mmanya.
A na-etinye oku ugbu a Ihe ndekọ n'ịntanetị iji chekwaa dọkụmentị, kọntaktị na kalenda igwe ojii. Ihe ohuru ohuru bu Ngwa weebụ: GNOME 3.2 eme ka o kwe omume iji weebụsaịtị dị ka ngwa ekele Epiphany, ihe nchọgharị weebụ ndabara, mana agaghị emetụta ya ma ọ dabere.
Anyị nwekwara ike ịkpọtụrụ kọntaktị anyị na ngwa ọhụrụ akpọrọ Ndi ana-akpo anyị ga-ejizi ngwa ọhụrụ ahazi akwụkwọ anyị Documentos.
Ihe na-adọrọ mmasị anyị nwere ike ịtụkwasị obi ugbu a bụ nhụchalụ na Njikwa faili maka faịlụ anyị, bụrụ ihe onyonyo, egwu ma ọ bụ ihe nkiri. Ihe dika ihe anyi na eme Nlele Gloobus. Emegharịrị ihuenyo nbanye, etinyere ozi, ma agbakwunye ọkwa ọhụụ mara mma.
N'ikpeazụ, ọ bara uru ịkọwapụta mmeghari ohuru nke ọdịdị ahụ. Visual nhicha-agụnye:
Okwu Ochichiri - Ngwa Media nwere ike ịhọrọ ugbu a iji ọdịiche dị n'okwu gbara ọchịchịrị. Jiri ya Ihe nkiri ihe nkiri na Ihe onyonyo.
Ugbu a, akụkụ windo ndị ahụ na-adọrọ adọrọ.
Ma ọkwa maka nkata na-adọrọ mmasị nke ọma.
Ugbu a dị iche iche dialog, dị ka netwọk dialog, na-eji ụdị nke GNOME Shell.
Ngosipụta ọhụụ dị iche iche maka ndị na-eche echiche zuru ezu, dị ka onyinyo nkedo na akara ngosi bọtịnụ, ogwe ngwaọrụ ọhụụ ọhụrụ, na ụdị bọtịnụ dị mma na steeti ndị a gbanwere bọtịnụ. Na mgbakwunye, elekere anọ na-elekwasị anya ga-egosi naanị mgbe ị na-eji ahụigodo mee ihe na ngwa.
Pụrụ ịhụ ihe a niile na ndị ọzọ na ihe oyiyi gị na hapụ ndetu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Gnome 3.2 dị
Nnukwu, mgbe anyị malitere ịmepụta ngalaba: "Nseta ihuenyo nke onye na-agụ" anyị ga-etinye Gnome 3.2 gị na Arch?
Hahaha ee. N'ezie, kemgbe ụnyaahụ enwere m 3.2 site na gnome-unstable repo, mana awa ole na ole gara aga ha gafere ya maka ule.
Kedu otu m ga esi esi wụnye ya na LMDE n’emebighi usoro kwusi
Ga-achọ ka m chee nhọrọ 2 ma echeghị m na ha kwụsiri ike ịsị:
- download na-ebudata koodu isi site na github ma chịkọta.
- use na-eji nnwale Debian repos (agbanyeghị na amaghị m ma ha atụkwasịlarị 3.2)
Kedu nke ị họọrọ? 😀
Eziokwu bụ, anaghị m akwado ka ị jiri nnwale nyocha ahụ ebe ọ bụ na ha na-enye nnukwu nsogbu ma ana m agwa gị nke ọma n'ihi na m nwara m ga-echere onye ga-eme ezigbo nkuzi banyere etu esi eme ya n'enweghị nsogbu iji nwee ike ịnụ ụtọ gnome3 na debian!
N'ezie, echeghị m na onye ọ bụla nwere ike ịme nkuzi ahụ. The mgbe niile ntinye nke emelitere nchịkọta na Debian Testing, ga-eme ka dị nsọ akwụkwọ, ihe gharazie ịba uru na-erughị ihe ọ bụla.
Nke ahụ agaghị ekwe omume. Dịkarịa ala maka ugbu a.
Ntinye HowTo (+ nhazi) na distros dị ka Debian ga-adị mma n'ụzọ iji nweta nkwụsi ike na ndakọrịta na sistemụ ahụ, ebe ọ bụ na ahụmịhe m na-emelite Gnome adịghị atọ ụtọ 🙁
Kedu distro jiri gosipụta nsogbu ndị a ...?
Enweela m 3.2.n gnome na arch, n'ụzọ kde nwere ike ịhazi na ndị ọzọ mana ọ nweghị interface dị ka ngwa ngwa na njikwa dị ka shem gnome, na ọ bụrụ na m na-atụ uche ịhazi ụfọdụ ndị na-ebupụta na taskbar karịa karịa nke gnome shell extensions .
Ugbua? Chei ... ịtụnanya, Arch dị ka mgbe niile ... na-ewetara anyị ihe kachasị ọhụrụ na ụbọchị ole na ole.
Ee na na ị bụ eziokwu, KDE na-erepịakwa karịa Gnome na nke a abụghị ihe nzuzo ... enwere ụgwọ iji kwụọ ụgwọ maka ịmegharị nke ọma, ọ dị mma? 🙂🙂
Ndewo, abụrụ m ọhụụ na ụwa Linux ma m nwere Ubuntu 10.10 na Gnome 2.30 ma achọrọ m ịma ma Gnome 3.2 kwụsiri ike iji wụnye sistemụ m ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, kedu ka esi eme ya? Adịghị anya gara aga, m gbalịrị itinye Gnome3 na ubuntu mana nsonaazụ ya bụ ọdachi. Site ugbua na-ekele gị nke ukwuu.
Ebe ọ bụ na ị na-eji Ubuntu, ka ị ghara ime ka ndụ gị sie ike, chere ruo mgbe ewepụtara mbipute 11.10, nke m chere na ọ na-abịa na gnome 3, mgbe ahụ ị ga-etinye shea ahụ iji mechaa ya.
Ekwadoro m ka ị chere Ubuntu 11.10, ọ ga-abịa na Gnome3 arụnyere na ndabara, otu a ị nwere ike iji ya na-enweghị nsogbu.
Say na-ekwu na ị gbalịrị ịnwale ya ma ọ bụ ọdachi, ọ bụrụ na ịchọrọ, lelee usoro anyị na-ahapụ na nkuzi a iji hụ ma ị tufuru ihe ị ga-eme: Ntinye na nhazi nke Gnome-Shell na Ubuntu
Agbanyeghị, ana m akwado na ọ bụrụ na ị bụ ọhụụ na ụwa a, ezigbo enyi chere izu 2, nke ahụ bụ oge Ubuntu 11.10 ga-ewe iji pụta, ma ebe ahụ ị nwere ike ịnwale Gnome3 + GnomeShell.
Ugbu a, banyere ma ọ bụ na ọ kwụsiri ike ma ọ bụ na ọ bụghị, na ArchLinux m gbalịrị ya ma rụọ ọrụ ebube, ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ elav Gbalịrị ya na Ubuntu, ọ bụghị ihe ọjọọ, naanị na ọ bụ ihe dị ọhụrụ / ọhụụ, ọ ka enweghị ike gbanwee, ahaziri ka mmadụ ga-achọ.
Ekele m na echere m na m nyeere gị aka 😀
Chei, i di ka onye na ekwuputa akwukwo.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị ọhụụ, ọ bụ nzuzu ịwụnye ihe hà ka gburugburu ebe eserese iji wepụ ya n'izu abụọ
Etu esi egosipụta prefix http na Firefox 7